Yakachipa yeEpostar Chitikiti Mitengo uye Mitengo Yekufamba | Save A Train
2. About Eurostar 3. Pamusoro Pfungwa Kuti Utore Aye Akachipa Eurostar Chitikiti
10. Izvo zviteshi zvinoshandiswa neEurostar 11. Eurostar FAQ
Zvitima zveEurostar zvine mazana emakirasi masevhisi ekuvakirwa chero mabhajeti, uye chero rudzi rwemufambi, kunyangwe iwe uri bhizinesi rekufamba kana zvekuzorora kana zvese zviri zviviri 🙂
Iyi kirasi yematikiti inodhura kupfuura iyo yemhando yemaTiketi Euroostar tikiti, ari Tiketi yePremiyamu inopa mamwe mabasa. Pamusoro pekubatsira kwemaStandi matikiti atakanyora pamusoro, Matikiti ePrince Standard anopa zvigaro zvinoyevedza zvine imwezve gumbo, sarudzo yakasarudzika yemagazini uye mapepanhau anopiwa mahara, uye iwe unopihwa chikafu chisina kujeka uye zvinwiwa kune chigaro chako pane iyo Eurostar. Matikiti ePrince standard anokwenenzverwa nemari mubhadharo zvichienderana nekwauri kuenda.
– From 200 pfungwa: Iwe unowana matikiti eEostostar pamitengo yakaderedzwa.
– Kana iwe ukasvika 500 pfungwa: unogona kuwana 1 kurovedza sevhisi kusimudzira.
MuLondon, Mazuva ano Zvitima zveEurostar zvinobva zvasvika St Pancras International Chiteshi, iri kuchamhembe kweLondon guta. Before 2007, Zvitima zveEurostar zvaimboita kusvika kuWaterloo Station muLondon.
Amsterdam Centraal (Amsterdam Central Station) iri muAmsterdam guta pakati chaipo porwizi, paunobva pachiteshi chechitima, unoona Amsterdam Main Street izere nezvinokwezva se madame Tussauds uye kwete kubva ikoko zvakare weRed light district district. Sezvakawanda muzvitima zvikuru zvechitima muEurope, une machira depots anovhura mangwanani uye anovhara kunonoka kana iwe uchingoda kushanyira 1 zuva kana usati waona kuti utarise muhotera yako.
Antwerp Central Station ndipo paunokwira Eurostar muAntwerp iro guta repiri reBelgium, Kana iwe uchifamba kubva Antwerp, tinokurudzira kuti unouya pachiteshi chechitima zvakareba kupfuura zvakakurudzirwa 1 awa isati yaenda nekuti izvi chiteshi chechitima chakunda mibairo yekushongedza uye zvivakwa uye zvine 5 pasi uye nezvakanaka kwazvo kufamba mairi.
Iwe unoda here kubatidza peji ino kune yako saiti? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A - (Mupumburu pasi kuona Embed Code), Kana kuti unogona kungobatanidza zvakananga kune ino peji.